Full Ngaphakathi Exchangeable Worktable GS-6015CE - China Dongguan Glorystar Laser
Iimpawu Product ● Nge kuyilo ngokupheleleyo ebiyelweyo ndana, ukunciphisa laser radiation kwaye uphephe nayiphi na ukwenzakala ngoomatshini. ● Abantu Wabenza lo worktable exchangeable ukugcina ekulayisheni nokothula ixesha, kwaye chieve kakuhle umsebenzi omkhulu. ● ngqo ukugaya iimpahla kunye nezixhobo nedawo High, ingxolo ephantsi ngqo phezulu. ● ISMC izakhi womoya, ulawulo smart ukuba egqibeleleyo ephantsi-ingcinezelo ngozipho. kushishino esebenzayo Luphawu kusetyenziswa kuzo zonke iintlobo amashishini iimveliso zesinyithi ezifana sheet processing metal, cookware kunye ...
● ISMC izakhi womoya, ulawulo smart ukuba egqibeleleyo ephantsi-ingcinezelo ngozipho.
amandla laser 1000W, 1500W, 2000W (Uyazikhethela)
indawo ukusebenza 6000 * 15000mm
lobukhulu: 16000 * 3000 * 2000
Previous: GS-3015CEG / GS-4020CEG Full ezivaliweyo Fibre Laser Cutting Matshini ne Exchange
Okulandelayo: Full Ngaphakathi Exchangeable Worktable GS-4020CE
1000watts Fibre Laser Cutting System
2000watts Fibre Laser Izixhobo Cutting
2kW Fibre Laser mgawuli Machine
Fibre Laser System 1kw
2000watts Fiber Laser System